August 2019 - Swelsone News
အပျို ကြီးဂိုဏ်းရဲ့ ..အနုပညာ …!!
August 31, 2019 space	0 Comments
အပျို ကြီးဂိုဏ်းရဲ့ ..အနုပညာ …!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ တစ်​ခါက… ‘အပျိုကြီးဂိုဏ်း’ ဆိုတာ ရှိသတဲ့။ ဂိုဏ်းဝင်အပျိုကြီးတွေဟာ ‘ယောင်္ကျား တွေနဲ့ လုံးဝ မပတ်သက်ရဘူး’… လို့ တင်းကြပ်တဲ့ စည်းကမ်းချထားတယ်။ တကယ်လို့…ပတ်သက်မိရင် အသင်း ဂိုဏ်းချုပ်
​လေးဘက်​နာ လက်​​တွေ့သက်​သာတဲ့ ရွှေထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဆေးနည်း​များ သပြုသီးနဲ့ဆားကို အချိုးတူပြုတ်​ပြီး​အ​ငွေ့ခံ ချွေး​အောင်း​ပေးလိုက်​ပါ ။တစ်​ကိုယ်​လုံးမှာရှိတဲ့ အပူအပုပ်​ ​ချွေး​တွေထွက်လာပြီးရင်​ ​ရေချိုး​ပေးပါ ။အစား​ရှောင်​စရာမလို​အောင်​ သက်​သာတယ်​ ။​ခြေစစ်​ လက်​စစ်​ ​တွေလည်းမကိုက်​​တော့ပါဘူး။ မြန်မာ့ဆေးစွမ်းနှင့်အိမ်တွင်းဆေးမြီးတိုများ[ သပြုသီး အပင်
ဆီးကျောက်တည်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသော ဆေးနည်းတလက်
Kidney Stones (ဆီးကျောက်တည်ခြင်း) ကဘာလဲ ဆီးကျောက်ဆိုသည်မှာ ဆီးအတွင်း၌ပါသော ပစ္စည်းများမှ ကျောက်ကပ်အတွင်း မာခဲခဲအနည်များကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဖြစ်စဉ်အား ဆီးကျောက်တည်ခြင်းဖြစ်စဉ် ဟုခေါ်သည်။ ဆီးကျောက်များသည် သေးသေးလေးမှ လက်မလောက်ထိ ကြီးတတ်ပါ၏။ ကျောက်ကပ်မှ ဆီးအိမ်ဆီသို့ ဆီးသယ်ပေးသောပြွန်
၆ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို မုဒိမ်းကျင့်​ပြီး သတ်​ခဲ့တဲ့ သားနှစ်​​ယောက်​အတွက်​ မိခင်က ​အ​လောင်း​ကူ​ဖျောက်ပေး
၆ နှစ်​က​လေးကို မုဒိမ်းကျင့်​ပြီးလည်​မျိုညှစ်​သတ်​ခဲ့တဲ့ သားနှစ်​​ယောက်​အတွက်​ မိခင်က ​က​လေးအ​လောင်း​ကို​ ​ဖျောက်ဖျ​က်​​ပစ်​​ခဲ့တဲ့ ဖြစ်​စဉ်​ Daily Mail သတင်းရဲ့​ဖော်​ပြချက်​အရ အိန္ဒိယနို​င်​ငံက အသက်​ ၆နှစ်​အရွယ်​ က​လေးငယ်​မိန်းက​လေးဟာ အသက်​ ၁၂ နှစ်​ နဲ့ ၁၅
ငါးသိုင်းချောင်း မြစ်ကူးတံတားအောက် သွားထိုင်သည့် ၇ တန်းကျောင်းသူ ပျောက်ဆုံး
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရေကြည်မြို့နယ်၊ ငါးသိုင်းချောင်းမြို့ မြစ်ကူးတံတားအောက်တွင် ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ၇ တန်းကျောင်းသူ ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ပျောက်ဆုံးနေသည့် ကျောင်းသူမှာ အောင်ဆန်းရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်၍ ငါးသိုင်းချောင်းအထက်တန်းကျောင်းတွင် ၇
၄ တန်းကျောင်းသူအားစာသင်ခန်းအတွင်း အတင်းအဓမ္မဝင်ခေါ်သူ ၂ ဦးကို ရွာသားများ ဝိုင်းဖမ်း
၄ တန်းကျောင်းသူအားစာသင်ခန်းအတွင်း အတင်းအဓမ္မဝင်ခေါ်သူ ၂ ဦးကို ရွာသားများ ဝိုင်းဖမ်း နတ္တလင်းမြို့နယ်မှာ ကျောင်းစာသင်ခန်းအတွင်း ဝင်ရောက်ပြီး ၄ တန်းကျောင်းသူအား အတင်းအဓမ္မ ဝင်ရောက်ခေါ်ယူသူ နှစ်ဦးကို ကျေးရွာသားတွေက ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပြီး အမှုဖွင့် အရေးယူထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အေတီ တံတားအနီး ပစ်ခတ်မှုတွင် ပစ္စတိုသေနတ်ကိုင်ပြီး အေတီချောင်းထဲ ပစ်ခတ် ခုန်ချထွက်ပြေးသွားသူ မောင်းလာသည့််ကားမှ ဘိန်းဖြူများတွေ့ရှိ
ယနေ့ သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် လားရှိုး၊ အေတီ တံတားဘက် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ပစ်ခတ်ထွက်ပြေးသူတွေ မောင်းလာတဲ့ ဖိုးဝီးကားလော့ကျနေလို့ ကရိန်းနဲ့ဆွဲပြီး နယ်မြေစခန်းကို သယ်သွားကြောင်း သိရပါတယ်။
လူ(၅)ဦးက ကိုယ်ဝန်ပျက်တဲ့ အထိ ဇနီးကို အဓမ္မကျင့်ခဲ့လို့ ၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အဆုံးစီရင်
အိန္ဒိ ယနိုင်ငံ မှာ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် အ်ိမ်ထောင်သည် ကလေးမိခင်လောင်းတစ်ဦးကို လူယုတ်မာ (၅)ယောက်က အဓမ္မဝိုင်းကျင့်ခဲ့လို့ ဗိုက်ထဲ က ကလေးပျက်ကျသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရ ပါ တယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီး ဟာ အသက်
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ရဲ့ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၁.၉.၂၀၁၉ မှ ၇.၉.၂၀၁၉ ထိ)
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ရဲ့ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက် မှ စက်တင်ဘာလ ၇ ရက် ထိ) “
သြဂုတ် (၃၁ ) ညနေ ၄း၂၀ နာရီခန့် တွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၏ ပစ်ခတ်ခံရပြီးနောက် လားရိူးမြို့ရှိ AT တံတားကို ပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်
သြဂုတ် (၃၁ ) ညနေ ၄း၂၀ နာရီခန့် တွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၏ ပစ်ခတ်ခံရပြီးနောက် လားရိူးမြို့ရှိ AT တံတားကို ပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ် လားရိူးမြို့ရှိ AT တံတား တွင် စူပါကာစတန် ကားတစ်စီး